Wargeyska “Marca” oo shaaca ka qaaday labada macalin ee sida xoogan loo hadal hayo in ay noqdaan badalka Zidane ee Real Madrid – Gool FM
Wargeyska “Marca” oo shaaca ka qaaday labada macalin ee sida xoogan loo hadal hayo in ay noqdaan badalka Zidane ee Real Madrid
(Madrid) 31 Maajo 2018. Zinedine Zidane ayaa si layaab leh ugu dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda Real Madrid, kadib shir jaraa’id ay si wada jir ah ugu qabteen isaga iyo Florentino Perez garoonka Santiago bernabéu.
Go’aanka Zinedine Zidane ayaa wuxuu yimid kadib maalmo kooban ay Real Madrid ku guuleesaratay tartanka Champions League markii saddexaad ee xiriir ah, si uu u soo afjaro waayihiisa Los Blancos kadib 9 koob uu kula guuleystay mudada labada sano uu soo maamulayay.
Dhinaca kale wargeysa kasoo baxa caasimada Madrid ee “Marca” isla markaana si xoogan kaga ag dhow arimaha Real Madrid ayaa wuxuu xaqiijiyay in Los Blancos ay u jeedsan doonto in ay lasoo saxiixato macalinka kooxda Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino, maadaama uu qeyb ka yahay macalimiinta uu la dhacsan yahay Florentino Perez.
Inkastoo uu macalinka reer Argantina Mauricio Pochettino uu dhawaan saxiixay heshiis cusub uu kusii joogayo Tottenham Hotspur, hadana waxaa u furnaan doonta in uu noqdo badalka Zidane hadii ay Real Madrid dalab u gudbiso si uu u leeliyo kooxda.
Saxaafada Spain ayaa sheegeysa in tartan ugu xoogan uu dhex mari doona macalimiinta Mauricio Pochettino iyo Maurizio Sarri, macalinkii hore ee kooxda Napoli, si mid kood uu u noqdo madalka Zidane ee kooxda Real Madrid.
Kabtanka kooxda Real Madrid Sergio Ramos oo macsalaameeyay Zinedine Zidane
Ka tagista Zidane ee kooxda Real Madrid oo saameyn ku yeelan karta mustaqbalka Ronaldo